Beesha PU PEO oo ka kooban 54 kooxo qowmiyadeed ah oo ku nool Vietnam - Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam
Wwaa 900 oo qof, PU PEO waxay ku urursan yihiin Xuduuda Shiinaha iyo Vietnam gobolka in Dong Van, Yen Minh iyo Degmooyinka Meo Vac of Ha Giang1 Gobolka. Iyagana waa loo yaqaan Ka Beo iyo Penti Lo Lo. Afkoodu wuxuu kudhowyahay kan Co Lao, La Chi iyo La Ha waxaana iska leh Kooxda Kadai2.
Twuxuu PU PEO inta badan ku beeraa galley, bariis, galley iyo digir milpas iyo dhul beereed. Qalabka beeraha waxaa ka mid ah barkimooyin iyo rake iyo lo 'ahaan kala jar. Waagii hore cuntada daruuriga ah Cuntooyinka dally waxay ahaayeen bur la kariyey.
Tlabiskii dumarka 'PU PEO' wali wuxuu hayaa aqoonsiyadiisa qaran ee lagu muujiyey qaabkooda timaha, garbasaarada, goonooyinka, jaakadaha iyo macawisyada. Waxay ka faa'iidaystaan ​​qaybo ka mid ah dharka midabada kala duwan si ay u abuuraan qaabab qurxin leh. Raggu waxay u labistaan ​​sida qowmiyadaha kale ee gobolka.
Guryahooda waxaa lagu dhisay dhulka iyagoo ah kooxo yar yar. PU PEO waxay dejineysaa ku beddelashada kan Ubaxa iyo Hmong. Abtirsiin kasta oo qoys wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah oo magacyo dhexe ah. Abtirsiinta dhexdeeda, kuwa isku jiilka ah waxaa la siiyaa isla magaca dhexe.
Tsi adag u ilaali qaanuunka guurka safka. Haddii nin ku abtirsada uu guursado gabadh ka soo jeedda B, markaa ragga ka mid ah B looma oggola marnaba inay haween ka guursadaan A. Dad badan oo ka tirsan qowmiyadaha kale waxay noqdeen soddog ama soddog PU PEO qoysas. Reerka caruusku waxay u raadiyaan guur isaga, xaflada arooska kadib, caruusadu waxay ku biirtaa qoyska ninkeeda. Carruurtu waxay qaataan magaca qoyska aabbahood; aabaha ama seyga ayaa ah milkiilaha guriga.
Fxafladaha aan caadiga ahayn waxay ka kooban yihiin xafladda bunga iyo xafladda bandhigga. PU PEO waxay muhiimad weyn siinaysaa cibaadada awoowayaasha. Meesha allabariga waxaa badanaa la dhigaa dhalooyin yaryar oo dhoobo ah, weel walbana wuxuu astaan ​​u yahay jiil. PU PEO waxay qabataa xaflado sanadle ah iyo xaflado sanadle ah.
Tisagu PU PEO waa mid ka mid ah qowmiyadaha tirada yar ee wali adeegsanaya durbaanka naxaasta ah, laakiin kaliya cibaadooyinka. Caadooyinka PU PEO, waxaa jira durbaanno lab iyo dhaddig ah oo labo labo loo dhigay. Labada durbaan ayaa is hor fadhiya oo qof dhexdooda taagan ayaa garaacaya.
Beeraha cabudhin ee gobolka Ha Giang (Xigasho: Daabacayaasha VNA)
(Booqday jeer 779, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,850
← Beesha RA GLAI ee 54 qowmiyadeed ee Vietnam
Beesha H'MONG oo ka kooban 54 qowmiyadeed oo ku nool Vietnam →
Comments Off on SIDEE WAY U QABATAY Faransiiska inay la wareegaan Vietnam sanadkii 1857? - Qaybta 1
Booqashada Maanta: 144
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,065
Guud ahaan Wadarta: 285,960